Tag: spf firaketana | Martech Zone
Tag: firaketana spf
Alatsinainy Janoary 14, 2013 Zoma, Jona 19, 2015 Douglas Karr
Nofonosinay ny bilaoginay isan-kerinandro (aza hadino ny misoratra anarana!) Ary hitako fa ambany dia ambany ny tahan'ny fisokafana sy ny tsindry. Mety ho maro amin'ireo mailaka ireo no tsy tonga any anaty boaty akory. Ny singa iray lehibe dia ny fanananay firaketana SPF - firaketana an-tsoratra DNS - izay tsy nanondro fa ny mpamatsy serivisy mailaka vaovao dia iray amin'ireo mpandefa anay. Ireo mpanome tolotra Internet dia mampiasa an'ity firaketana ity amin'ny
Tamin'ny herinandro lasa aho dia nijanona tao amin'ny burrito McSkillet handeha hiasa. Azoko atao angamba ny manoratra lahatsoratra iray amin'ny haben'ny fitiavako ireo sy ny burritos fisakafoanana Qdoba, fa kosa hiantra anao aho. Fony aho tany McDonalds, ny fahalalako no nahazo tombony tamiko ary nandidy an'i McCafe Mocha aho fa tsy nijanona tao amin'ny fivarotana kafe tiako indrindra. Famantarana miloko sy be pitsiny ary fonosana miaraka amin'ny tonon-tany no manodidina anao ary mahatonga anao hahatsapa ho toy izany
Mailaka tsy mandalo? Manampia firaketana SPF!
Alarobia, Aprily 30, 2008 Zoma, Jona 19, 2015 Douglas Karr
Vao nifindra monina tany amin'ny Google Applications aho ny mailaky ny orinasako. Hatreto dia tena tianay ny fahalalahana omeny antsika. Talohan'ny nahatongavantsika tao amin'ny Google, dia tsy maintsy nametraka fangatahana fiovana izahay, fanampiana lisitra sns. Amin'izay isika dia afaka mitantana izany amin'ny alàlan'ny interface tsotra an'i Google. Ny fihemorana iray izay tsikaritray, dia ny mailaka sasany avy amin'ny rafitray izay tsy tonga aty aminay. Nanao famakiana vitsivitsy tao amin'ny Google aho